Col. Xasan Max’ed Nuur (Shaati Gaduud) oo xalay ku geeriyooday dalka Jarmalka. | Salaan Media
INAALILAAHI WAINAALILAAHI RAAJICUUN
Waxaa xalay ku geeriyooday dalka Siyaasigii Soomaaliyeed ee caanka ahaa Col. Max’ed Nuur (Shaati Gaduud) ka dib markii la sheegay inuu xanuunsanaa mudooyinkan, iyadoo geerida marxuumkana ay ka tacsiyadeynayaan madax ka tirsan dowlada.
Marxuumka ayaa ka mid ahaa hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee ka soo jeeda beelaha dega gobolada Bay iyo Bakool, wuxuuna wax ka soo dhisay xilal kala duwana ka soo qabtay dowlada KMG aheyd ee lagu unkay sanadkii 2005tii degaanka Mbaghati ee dalka Kenya taasoo uu madaxweyne ka noqday marxuum C/llaahi Yuusuf Axmed.
Hase ahatee marxuumka ayaa mudooyinkan dambe laga waayey masraxa siyaasada Soomaaliya ka dib markii ay soo wajaheen xanuuno kala duwan oo sababay in ugu dambey uu ugu geeriyoodo dalka Jarmalka oo daweyn loogu qaaday.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray Allaha u naxariistee Siyaasiga Xasan Maxamed Nuur (Shaati Gaduud) oo xalay ku geeriyooday dalka Jarmalka.
Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa uga tacsiyadeeyey ehellada iyo qaraabada uu ka geeriyooday marxuumka waxaana uu Alle uga baryey inuu janadii ka waraabiyo,ehellada iyo qaraabada uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan Alle haka siiyo.